စံဝင်းချို Daily Hope Choose Your Friends Wisely
“အလွဲမယူကြနှင့်။ မကောင်းသောသူတို့နှင့် ပေါင်းဘော်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းသောအကျင့် ဓလေ့ ယိုယွင်းတတ်၏။” (၁ကော ၁၅း၃၃)
ကလေးများကျောင်းစတင်သွားသည့်အချိန်အခါတွင်၊ သင်၏အခြေခံ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသူတို့၏အသက်တာတွင် မရှိတော့ပါ။သူတို့သည်စတင်၍ သက်တူတန်းတူတို့၏အရှိန်အ၀ါကိုအသုံးပြုလာကြသည်။ သူတို့သည် ကြီးလာ ကြသည်နှင့်အမျှ၊သူတို့နှင့်အဆင့်အတန်းတူများနှင့်သာပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြသည်။
ထိုကြောင့်မိဘများသည် ကလေးများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုကြရမည်၊သူတို့၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဟာ မည်သူတွေဖြစ်မည်နည်း။ မိဘများကကလေးတွေကိုနားလည်စေရမည်၊ သူတို့၏မိတ်ဆွေများက သူတို့အပေါ် သို့ထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အရေးကြီးကြောင်းများကို အကူအညီပေးကြရမည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကလေးများကိုအားပေးရမည်၊ မိတ်ဆွေရွေးချယ်ရာတွင်မိမိကိုမြင့်တင်ပေးမည့်သူကိုရွေးကြ ရမည်၊ မိမိကိုဆွဲချမည့်သူမဖြစ်စေရ။ အားပေးအားမြှောက်ပြုမည့်သူနှင့် အသက်တာတွင်အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိမည့်သူများ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြေခံအကြောင်းသည်အောင်မြင်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် သူသည် သူတို့ရွေးချယ်ထားသည့်မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။ သူတို့ကို ပိုမိုကြိုးပန်းရန် စေ့ဆော်မှုပေးမည့်သူ သို့မဟုတ် မလုပ်နိုင်အောင်ဆွဲချမည့်သူများဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် တရားသဖြင့်ရထိုက်သည်ကိုဘယ်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုလိုချင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည်၊ မိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်သွယ်မှု၊နှင့်လက်သင့်ခံခြင်းကိုလေ့လာကြည့်ရှုနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဖေါ်ရွေစွာဆက်ဆံ၍အဖွဲ့သားဖြစ်ချင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဘုရားသခင်ကဒီလို ဆက်သွယ်မှုပေးခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “ထိုအတူ၊ အများဖြစ်သော ငါတို့သည် ခရစ်တော်၌ တကိုယ်တည်း ဖြစ်၍၊ အသီးသီး အင်္ဂါချင်း ဖြစ်ကြ၏။” (ရော ၁၂း၅)
ကလေးတွေကိုဤအမှန်တရားသင်ပေးခြင်းသည်အရေးကြီးသည်၊ ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထဲကအခြားသူများ နှင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်နှင့်အခြားသူများကိုလိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်း ကဆန့်ကျင်ဘက်သင်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ယာဉ်ကျေးမှုသည် အလွန်အမင်းတစ်ဦးချင်း၊ လူတိုင်းသည် တာဝေးခရီးသည်များဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ကြရမည်နှင့်ကိုဝါသနာပါအရာကို ကြည့်ရှုပါ။ ဤအရာသည်ကလေးများကိုအားပေးမှုမရှိဘဲထားခဲ့သည်နှင့်နားလည်ခံယူတတ်ခြင်းမရှိဘဲပိုင်ဆိုင် ပစ္စည်းလဲမရှိကြပါ။ ဤကဲ့သို့ဖြစါရ၍ စိတ်အားငယ်ခြင်းနှင့် အခြားစိတ်ထိခိုက်ဖွယ်သောနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းများ ပြင်းထန်လာသည်။?
အမှန်တရားသည်၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆိုင်သောကျန်းမာသည့်အသက်တာဖြင့်နေထိုင်ရန်လိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ ၏အသက်တာတွင်လူများလိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကျန်းမာ၍အထောက်အကူပေးသော အဆက် အသွယ် များလိုအပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း အခြား အဖွဲ့အစည်းမှလိုအပ်သည်။ ဤအရာသည်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့်နေရာ(ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း)ဖြစ်သည်။
Tuesday May 17, 2011 12:00AM Posted by Rick Warren